vipassana – Dhammadīpa
Meditation on the Four Great Elements
Posted on6Apr 2019 by Ashin Sopāka
“Again,amonk reviews this body, however it may be placed or disposed, in terms of the elements: ‘There are in this body the earth-element, the water-element, the fire-element, the air-element.’
“Just as ifaskilled butcher or his assistant, having slaughteredacow, were to sit atacrossroads with the carcass divided into portions, soamonk reviews this very body…in terms of the elements: “There are in this body the earth-element, the water-element, the fire-element, the air-element.”
“So he abides contemplating body as body internally and externally. He abides contemplating arising phenomena in the body, he abides contemplating vanishing phenomena in the body, he abides contemplating both arising and vanishing phenomena in the body. Or else, mindfulness that “there is body” is present to him just to the extent necessary for knowledge and awareness. And he abides independent, not clinging to anything in the world. And that, monks, is howamonk abides contemplating body as body.” – DN 22
“Puna caparaṁ, bhikkhave, bhikkhu imameva kāyaṁ yathāṭhitaṁ yathāpaṇihitaṁ dhātuso paccavekkhati: ‘atthi imasmiṁ kāye pathavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātū’ti.
“Seyyathāpi, bhikkhave, dakkho goghātako vā goghātakantevāsī vā gāviṁ vadhitvā catumahāpathe bilaso vibhajitvā nisinno assa; evameva kho, bhikkhave, bhikkhu imameva kāyaṁ yathāṭhitaṁ yathāpaṇihitaṁ dhātuso paccavekkhati: ‘atthi imasmiṁ kāye pathavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātū’ti.
“Iti ajjhattaṁ vā kāye kāyānupassī viharati bahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati. Samudayadhammānupassī vā kāyasmiṁ viharati, vayadhammānupassī vā kāyasmiṁ viharati, samudayavayadhammānupassī vā kāyasmiṁ viharati. ‘Atthi kāyo’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.”
ရဟန်းတို့ တစ်ဖန် ထို့ပြင်လည်း “ဤရုပ်အပေါင်း၌ မြေဓာတ် ရေဓာတ် မီးဓာတ် လေဓာတ်သည် ရှိ၏”ဟု ဤရုပ်အပေါင်းကို တည်မြဲတိုင်း ထားမြဲတိုင်းပင် ဓာတ်အားဖြင့် စူးစိုက်ဆင်ခြင်၏။
ရဟန်းတို့ ဥပမာသော်ကား ကျွမ်းကျင်သော နွားသတ်သမားသည်လည်းကောင်း နွားသတ်သမား၏တပည့်သည်လည်းကောင်း နွားကို သတ်၍ လမ်းလေးခွဆုံရာ၌ အစုအပုံအားဖြင့် ခွဲခြားလျက်ထိုင်နေရာသကဲ့သို့၊ ရဟန်းတို့ ဤအတူပင် ရဟန်းသည် “ဤရုပ်အပေါင်း၌ မြေဓာတ် ရေဓာတ် မီးဓာတ့်လေဓာတ်သည် ရှိ၏”ဟု ဤရုပ်အပေါင်းကို တည်မြဲတိုင်း ထားမြဲတိုင်းပင် ဓာတ်အားဖြင့် စူးစိုက်ဆင်ခြင်၏။
ဤသို့ မိမိ၏ ရုပ်အပေါင်း၌မူလည်း ရုပ်အပေါင်းကို အကြိမ်ကြိမ် ရှုလေ့ရှိသည်ဖြစ်၍ နေ၏၊ သူတစ်ပါး၏ ရုပ်အပေါင်း၌မူလည်း ရုပ်အပေါင်းကို အကြိမ်ကြိမ် ရှုလေ့ရှိသည်ဖြစ်၍ နေ၏၊ မိမိ သူတစ်ပါး၏ရုပ်အပေါင်း ၌မူလည်း ရုပ်အပေါင်းကို အကြိမ်ကြိမ် ရှုလေ့ရှိသည်ဖြစ်၍ နေ၏၊ ရုပ်အပေါင်း၌ဖြစ်ကြောင်း တရားနှင့် ဖြစ်ခြင်းသဘောကို အကြိမ်ကြိမ် ရှုလေ့ရှိသည်ဖြစ်၍မူလည်း နေ၏၊ ရုပ်အပေါင်း၌ပျက်ကြောင်း တရားနှင့် ပျက်ခြင်းသဘောကို အကြိမ်ကြိမ် ရှုလေ့ရှိသည်ဖြစ်၍မူလည်း နေ၏၊ ရုပ်အပေါင်း၌ ဖြစ်ကြောင်း ပျက်ကြောင်းတရားနှင့် ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းသဘောကို အကြိမ်ကြိမ်ရှုလေ့ရှိသည်ဖြစ်၍မူလည်း နေ၏၊ ထို့ပြင် “ရုပ်အပေါင်းသည်သာလျှင် ရှိ၏”ဟု ထိုရဟန်းအားသတိသည် ရှေးရှုထင်၏၊ (ထိုသတိသည်) အဆင့် ဆင့် အသိဉာဏ်တိုးပွားခြင်းငှါသာ ဖြစ်၏၊ အဆင့်ဆင့်သတိတစ်ဖန် တိုးပွါးခြင်းငှါသာ ဖြစ်၏၊ (ထိုရဟန်း သည် တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်) မမှီမတွယ်မူ၍လည်း နေ၏၊ လောက၌ တစ်စုံတစ်ရာကိုမျှလည်း (ငါ, ငါ၏ ဥစ္စာဟု) စွဲလည်း မစွဲလမ်း။ ရဟန်းတို့ ဤသို့လည်းရဟန်းသည် ရုပ်အပေါင်း၌ ရုပ်အပေါင်းကို အကြိမ်ကြိမ် ရှုလေ့ရှိသည်ဖြစ်၍ နေ၏။
“Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo quán sát thân này về vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: ‘Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại.’
“Này các Tỷ kheo, như một người đồ tể thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo quán sát thân nay về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới: ‘Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại.’
“Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. ‘Có thân đây’, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ keo sống quán thân trên thân.”
Top, Bottom: Malaysian Pied Fantail
Middle: White Throated Fantail
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, four great elements, insight, mindfulness, sati, vipassana
Posted on2Dec 2017 by Ashin Sopāka
“Suppose there wereapool of water—clear, limpid, and unsullied. A man with good eyesight standing there on the bank would see shells, gravel, & pebbles, and also shoals of fish swimming about and resting. Why is that? Because of the unsullied nature of the water. In the same way, thatamonk with an unsullied mind would know his own benefit, the benefit of others, the benefit of both; that he would realizeasuperior human state,atruly noble distinction of knowledge & vision: Suchathing is possible. Why is that? Because of the unsullied nature of his mind.” – AN 1.46
“Seyyathāpi, bhikkhave, udakarahado accho vippasanno anāvilo tattha cakkhumā puriso tīre ṭhito passeyya sippi­sambu­kampi ­sak­kha­ra­kaṭha­lampi macchagumbampi carantampi tiṭṭhantampi. Taṁ kissa hetu? Anāvilattā, bhikkhave, udakassa. Evamevaṁ kho, bhikkhave, so vata bhikkhu anāvilena cittena attatthaṁ vā ñassati paratthaṁ vā ñassati ubhayatthaṁ vā ñassati uttariṁ vā manussadhammā ala­mariya­ñāṇadas­sana­visesaṁ ­sacchi­karis­satīti ṭhānametaṁ vijjati. Taṁ kissa hetu? Anāvilattā, bhikkhave, cittassā”ti.
ရဟန်းတို့ ဥပမာသော်ကား ရေအိုင်သည် ကြည်လင်၏၊ သန့်ရှင်း၏၊ နောက်ကျုခြင်း ကင်း၏၊ မျက်စိအမြင်ရှိသော ယောကျာ်းသည် ကမ်းနား၌ ရပ်၍ ထို ရေအိုင်၌ သွားနေသည်လည်းဖြစ်သော ရပ်တည်နေသည်လည်းဖြစ်သော ယောက်သွား ခရုကိုလည်းကောင်း၊ ကျောက်စရစ် အိုးခြမ်းကွဲကိုလည်းကောင်း၊ ငါးအပေါင်းကိုလည်းကောင်း မြင်နိုင်ရာ၏။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် အဘယ့်ကြောင့်နည်းဟူမူ— ရဟန်းတို့ ရေ၏ မနောက်ကျုခြင်းကြောင့်တည်း။ ရဟန်းတို့ ဤအတူပင် ထိုရဟန်းသည် မနောက်ကျု သော စိတ်ဖြင့် စင်စစ် မိမိအကျိုးကိုလည်း သိလတ္တံ့၊ သူတစ်ပါးအကျိုးကိုလည်း သိလတ္တံ့၊ နှစ်ပါးစုံ အကျိုးကိုလည်း သိလတ္တံ့၊ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့အား လျောက်ပတ်သော ဉာဏ်အမြင်အထူးဖြစ်သော လူတို့၏ ကုသိုလ်ကမ္မပထတရား ဆယ်ပါးထက် လွန်မြတ်သော (ဈာန် မဂ် ဖိုလ်)တရားကိုလည်း မျက်မှောက် ပြုလတ္တံ့ဟူသော ဤအကြောင်းသည် ရှိ၏။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် အဘယ့်ကြောင့်နည်းဟူမူ— ရဟန်းတို့ စိတ်၏ မနောက်ကျုခြင်းကြောင့်တည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
“Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước trong sáng, sáng suốt, không bị khuấy đục. Tại đấy có người có mắt, đứng trên bờ, có thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại, đứng yên. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục, này các Tỷ-kheo. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với tâm không bị khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy có xảy ra. Ví sao? Vì rằng tâm không bị khuấy đục, này các Tỷ-kheo.”
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, insight, mindfulness, vipassana